पाल्पामा पत्ता लाग्यो अनौठो गुफा ! (तस्बीरसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
पाल्पामा पत्ता लाग्यो अनौठो गुफा ! (तस्बीरसहित)
काठमाडौंः पाल्पामा एक अनौठो गुफा पत्ता लागेको छ । तानसेन नगरपालिका–१४ अर्गलीस्थित रनुवा भन्ने ठाउँमा उक्त गुफा पत्ता लागेको हो ।
स्थानीय युवाले आफ्नै पहलमा गुफाबारे थप तथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गरेका हुन् । सिद्ध गुफा नाम दिइएको उक्त गुफाको लम्बाई करिब ४० मिटर रहेको स्थानीय दुर्गाराज पान्डेले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस दशैंमा भत्ता वितरण नहुँदा जेष्ठ नागरिक दुखी
रनुवास्थित कोलाचौर मन्दिर नजिकै उक्त गुफा रहे पनि अहिलेसम्म यसबारे सामान्य अध्ययन पनि सुरु भएको थिएन । स्थानीय युवाले लकडाउनको उपयोग गर्दै गुफाबारे थप अध्ययन गरेका हुन् ।
गुफाको नाप लिनेदेखि, सरसफाई गर्ने र सिंढी निर्माण गर्ने काम पूरा भएको पान्डेले बताए । त्यस्तै गुफा भित्रको साँघुरो क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न सजिलो बनाउने प्रयास पनि भइरहेको उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुस पाल्पा पहिरोः मृत्यु भएका तीनै जनाको परिचय खुल्यो
गुफाभित्र कलात्मक आकृति देख्न सकिन्छ । आकृतिसहित यसको बनावटले गुफालाई थप अनौंठो बनाएको छ । गुफाको संरक्षण गर्दै यसभित्र आवतजावत सहज बनाउन सके आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने स्थानीयको विश्वास छ ।
पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मीको संगम क्षेत्र नजिकै रहेकोले पनि छिमेकी जिल्लाबाट गुफा दर्शनका लागि पर्यटक ल्याउन सकिने उनीहरूको भनाई छ । तानसेन–रिडी–तम्घास सडकखन्डको अर्गलीस्थित देउराली बजारबाट डेढ किलोमिटरको दुरीमा उक्त गुफा पुग्न सकिन्छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार
याे पनि पढ्नुस १ नेपालीसहित ६ पर्यटक भारतको गुफामा भेटिए
ट्याग्स: गुफा, तानसेन नगरपालिका